Kurve – short cutty stool with 1 drawer and castors or rubber legs ( including cushion) Kurve – ထိုင်ခုံအပုဖြစ်သည်။ အံဆွဲ (၁)ခုနှင့် ဘီး (သို့မဟုတ်) ရာဘာခြေနှင့်ဖြစ်သည်။
Hanging cabinet with sliding glass door. ဘေးဆွဲမှန်တံခါးနှင့် နံရံကပ်ဗီရိုငယ်။ Size: W132*D40.7*H44 cm အတိုင်းအတာ – အလျား ၁၃၂၊ အနံ ၄၀.၇၊ အမြင့် ၄၄ စင်တီမီတာ
Showcase cabinet sperated in 8 units with4sliding glass doors. အကန့် (၈)ခု၊ မှန်ဆွဲတံခါး (၄)ခုပါသော အလှဗီရိုကြီး။ Size: W88*D40.7*H176 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၈၈၊ အနံ ၄၀.၇၊ အမြင့် ၁၇၆ စင်တီမီတာ
HANGING CABINET - GLASS
Hanging glass door cabinet without shelf. နံရံကပ်ချိတ်ဆွဲနိုင်သော စတီးတံခါးနှင့် ဗီရိုအသေးဖြစ်သည်။ အတွင်းဘက်တွင် စင်မပါဝင်ပါ။ Size: W88*D30*H44 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၈၈၊ အနံ ၃၀၊ အမြင့် ၄၄ စင်တီမီတာ
MAXBOOK-2 DOOR HALF HEIGHT,2SHELVES-GLASS
Half height glass door cabinet with2adjustable shelves. မှန်တံခါးနှင့် ဗီရိုအလတ်ဖြစ်သည်။ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော စင် (၂)စင်ပါဝင်သည်။
MAX-033 Shoe cabinet
pen doors shoe cabinet including5adjustable shelves ဖြုတ်တပ်နိုင်သော စင် (၅)စင်ပါဝင်သည့် အဖွင့်တံခါးဖိနပ်ဗီရို average capacity5pairs of shoes per shelf စင် တစ်စင်လျှင် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ဖိနပ်အရံ (၅)ရံအထိ ထည့်သိမ်းနိုင်သည်။
PUNTO Open door cabinet- High PUNTO လွှဲတံခါးဗီရို- အလတ် Size: W46.5*D40.7*H75 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၄၆.၅၊ အနံ ၄၀.၇၊ အမြင့် ၇၅ စင်တီမီတာ
Overhead sliding glass door cabinet with keylock. အပေါ်တွင်ထားသည့် ဆွဲမှန်တံခါးနှင့်ဗီရိုငယ်ဖြစ်ပြီး၊ သော့ခတ်နိုင်သည်။
Full height Sliding door cabinet with3adjustable shelves and keylock. ဘေးဆွဲတံခါးဗီရိုအမြင့်ဖြစ်သည်။ ဖြုတ်တပ်အသုံးပြုနိုင်သော စင် (၃)ချပ်ပါရှိပြီး၊ သော့ခတ်နိုင်သည်။